Home - FJKM Amparibe Famonjena
21 Aprily 2019
31 Martsa 2019
« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » Heb 10 :24
« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » Oha 14 :22
Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra. (…)
Ny tatitry ny fanompoam-pivavahana
Alahady faharoa manaraka ny Trinite ity alahady ity. Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM: “ Mampanjaka ny fahefany ny Tompo”. Alahady Fetim-pirenena ankalazana ny faha 62 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Alahady miavaka ho an’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, satria natokana ho Alahadin’ny taranaka ary koa Ivom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena. Ireo Sampana dimy (5) manao ny fankalazana an’Andriamanitra, ity taona 2022 ity, noho ny taon-jobily no nanantontosa ny fanompoam-pivavahana miaraka amin’ny mpianakavin’ny finoana. Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia endriny faharoa no narahina.
Hamaky manontolo ny tatitra
« MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO»
05 Jona 2022
12 Jona 2022
Ala.Trinite - SEKOLY FJKM
2 Tantara 20.5-9
2 Korintiana 10.1-11
19 Jona 2022
Ala. I man Trinite-Samp Vokovoko Manga
Ala. II man Trinite
« Arahaba, ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao. » Lioka 1 :28
Izany tenin’ny anjely tamin’i Maria, voafidy ho renin’i Jesoa izany, no tononina aminao koa ho fiarahabana sy fandraisana anao mitsidika ny TRANOKALA.
Nohasoavina isika tafahaona eto, satria ny Tompo no nampiray antsika. Ny fanantenana sy ny fitiavana avy amin’Ilay Zanak’Andriamanitra anie hampitombo hatrany ny finoana, izay efa nitoetra teto anivon’ny Fitandremana nandritra ny 160 taona.
Ny fitaovan-tserasera toy izao, dia ambohi-pihaonana, koa hiezaka hatrany izahay ny hanome ny tsara ho fantatra momba ny fiainam-piangonana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, mba hahafahan’ny tsirairay miara-miombon’aina sy mandroso hatrany amin’ny asa tsara.
Ny firariako ho anao : « Hambinina anie izay tia anao ; Fiadanana anie ho ao anatin’ny mandanao ; Fanambinana anie ho ao an-dapanao.» Salamo 122:7
Filohan'ny Gazety sy ny Tranokala
«Mampanjaka ny fahefany ny Tompo»
Tsianjery “ “… dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony Izy ” Efesiana 1 : 22a
TAFIKA MASINA FAMPIORENANA :
Folo taona lasa izay no nanaovana Tafika Masina tao Ambohitompoina sy ny manodidina, nefa toa tsapa fa mihemotra sy mangatsiaka ny mpianakavin'ny finoana, koa andraikity ny mpiantafika no mamerina ny olona indray ao amin'i Jesoa Kristy, mamerina ny olona ao am-piangonana,mampiorina ny finoana ao amin'i Jesoa Kristy...
RAMINO PAUL :
jobily faha 50 taona niasan'ny Mpitandrina Ramino Paul mivady teo amin'ny sehatry ny Fiangonana. Alahady 05 Jona 2016 - Espace Mahatehotia Ambohimarina Iavoloha.
5 MARTSA 1954 - 22 JONA 2020​
« Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. » APOK 14 : 13 Nindaosin’ny fahafatesana RAJAOFETRA Seta Marcel, Filoha amperinasan’ny Gazety TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANONKALA ny Alatsinainy 22 jona 2020 rehefa nampindramin’ Andriamanitra antsika nahalala azy sy nifanerasera taminy nandritra ny 66 taona.
Nitendry mialoha ny fotoam-pivavahana Alahady voalohan’ny taona
Mikasa hanjifa ny gazety taratry ny Famonjena ve ianao ?
Azonao raisina amin'ny endriny .pdf izany.
Tsidio ary ito rohy ito
Ahoana kosa ny fahitan'ny tanora ny tranonkala?
"Manampy ahy amin'ny fanarahana ny fiainam-piangonana ito tranonkala ito rehefa sendra manantanteraka iraka ivelan'ny renivohitra aho"
"Sehatra mafinaritra hanembonako ny mpiakavin'ny finoana ao Amparibe ito tranonkala ito na dia aty ampitan-dranomasina aza ahy"
Zanaky ny fiangonana
"Momban'ito tranonkala ito ? Manomeha ahy ny tsara fantatra rehetra sy daty tsara tsarovana ary ny sendra tsy henoko tsara ny alahady"
"Tsidiako fa manampy ahy tokoa hahalala tsara ny sampana hidirako ito ho ahy voa noraisina mpandray tamin'ny novambra lasa teo"
Fa aiza tokoa moa no misy ny
FJKM Amparibe Famonjena ?